Banyere Anyị - Sichuan Shuer Medical Devices Co, Ltd.
Shuer Medical bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu ọkachamara na-emepụta ihe mkpuchi Gesala, dị ka ihe mkpuchi obodo, ihe mkpuchi ahụike, ihe mkpuchi ịwa ahụ, ihe mkpuchi KN95, ihe mkpuchi PM2.5, ihe mkpuchi FFP2 nwere iko, ihe mkpuchi FFP3 nwere iko, ahaziri iche. ihe mkpuchi, usoro pad nọọsụ graphene na pad pad ịwa ahụ.
Sichuan Shuer Medical Devices Co., Ltd bụ enyemaka zuru oke nke Sichuan Juneng Filter Material Co., Ltd.
N'afọ 2020, Shuer Medical amụrụ n'okpuru ndabere nke gọọmentị ime obodo ka ọ rụọ ọrụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe mberede nke mba, yana ọ bụ ngalaba dị mkpa iji mee mgbochi ọrịa mba na nchekwa mberede na mpaghara ọdịda anyanwụ nke biri na Chengdu - Aba. Mpaghara mmepụta ihe.
Usoro njikwa mmepụta ihe siri ike yana sistemu mmesi obi ike zuru oke.
Shuer Medical ewepụtala usoro ihe mkpuchi Gesala dijitalụ na ahaziri ahazi yana sistemu usoro ngwaahịa nọọsụ graphene.Ọ na-akwado nke ọma na ọkọlọtọ mmejuputa iwu GB nke mba yana mmepụta asambodo ụkpụrụ CE nke EU.Na ndabere a, anyị na-aga n'ihu na-emeziwanye ụkpụrụ maka ọnọdụ dị iche iche, karịsịa asambodo nke ngwaahịa dị elu, ma nọgide na-elekwasị anya na mmepe nke mbụ ihe ọhụrụ graphene dị elu na ngwaahịa ndị na-eguzogide ọgwụ.
Dị ka a ọhụrụ flter ihe ngwaahịa soplaya, Sichuan Jueneng na-elekwasị anya na r & d, mmepụta, ahịa na ọrụ nke mel-ịfụ fiter na ndị ọzọ na ngwaahịa; E nwere anọ ọhụrụ agbaze agbaze mmepụta akara na anyị factory, tumadi na-amị ndị na-esonụ isii edemede:
Lelee ngwa ahịa ndị ọzọ
Shuer Medical malitere site na nyocha na mmepe nke teknụzụ ngwa ngwa ụlọ ọrụ graphene, wee guzobe otu nyocha teknụzụ dị elu na mmepe otu ndị injinia na ndị dọkịta dị ka isi na ndị ọrụ nyocha teknụzụ ọkachamara na mmepe dị ka nkwado, na-etinye mgbe niile mma na ndị ahịa. jiri na mbụ.Na-aga n'ihu na-akwalite afọ ojuju ndị ahịa.
Njegharị ụlọ mmepụta ihe
Olileanya, Shuer Medical ga-abụ akụkụ bụ isi nke ihe mberede na nchekwa nke obodo na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke China.
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị - AMP Mobile Ihe mkpuchi China, Ihe mkpuchi ịwa ahụ nke ụlọ ahịa ọgwụ, Ihe mkpuchi ihu, Ihe mkpuchi mkpuchi China, Ihe mkpuchi PPE, Igwe iku ume FFP2,